Araho ny tsingerin'ny volana miaraka amin'ity widget ity ho an'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Raha liana amin'ny dingana amin'ny volana ianao, na noho ny antony fialam-boly na asa dia mila mahafantatra ny fizotry ny volana ianao, ny fampiharana Kalandrie Moon tsy tokony ho diso avy amin'ny lisitry ny rindranasa macOS anao. Rehefa avy nihazakazaka ny fampiharana dia misokatra ao amin'ny bara fizahana, noho izany, tsindrio iray monja no hidiranao.
Maimaimpoana ity rindrambaiko ity ao amin'ny Apple Store amin'ny fotoana nanoratanao ity lahatsoratra ity, ary noho ny minimalism sy ny fahazavany ny interface, raha mila an'ity fampiharana ity ianao dia tsy mety ny mandany vola vitsivitsy.
Manasongadina ny habetsaky ny fampahalalana avy amin'ny rindrambaiko izahay, fa aseho amin'ny endrika ambainy izay latsaka avy eo amin'ny toerana misy ilay rindranasa eo amin'ny bara fizahana ihany. Rehefa manokatra ny fampiharana ianao dia hita fa:
Voalohany indrindra ny fotoana fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany ary ny volana.
Ao amin'ny tapany afovoany no ahitantsika ny kalandrie amin'ny volana ankehitriny, miaraka amin'ny toeran'ny volana isaky ny andro: famolahana, fihoarana sns.
Miseho eo ambany toerana samy hafa an'izao tontolo izao. Izany hoe, afaka fantatsika ny toetran'ny volana ao an-tanànantsika, fa amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao koa.
Anisan'ireo asa hafa hitantsika:
Afaka manomboka ny widget avy hatrany, rehefa miditra ianao.
Natao hampiasaina loharanom-pahalalana kely indrindra sy ny fanjifana herinaratraa. Miasa na dia ivelan'ny Internet aza. Indray mandeha ihany ianao no mila miditra amin'ilay tamba-jotra rehefa ampiana toerana vaovao, alaina ny fampahalalana ilaina hampisehoana azy.
Tsy manokatra ny fampiharana dia mampiseho ny fizaran'ny volana ankehitriny ao amin'ny baran'ny menio, ary koa sarin'ny volana.
Mampiseho ny anaran'ny dingana ankehitriny.
Mampiseho ny fiposahan'ny volana sy ny fotoana voatondro.
Mampiseho ny fiposahan'ny masoandro sy ny fotoana napetraka io.
Manitsy ho azy ny ora fitahirizan'ny andro.
Fikirakirana fampahalalana mazava tsara miaraka amina interface tsara be
Kalandrie Moon dia ao amin'ny Apple Store, ny fampiharana dia amin'ny fiteny lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Araho ny tsingerin'ny volana miaraka amin'ity widget ity ho an'ny macOS
Notsapainay ny Dodocool DA158, headphone headband mamoritra mahery